अनुहार लागि कस्मेटिक प्रक्रियाहरु लाभकारी प्रभाव तिनीहरूले राम्रो hydration, पोषण, चयापचय प्रक्रियाहरू को शुद्धीकरण र सक्रियता योगदान भन्ने तथ्यलाई कारण छ। यो को अनुहार मा सफा छाला युवा र सौन्दर्य को संरक्षण ग्यारेन्टी। अनुहार सफा गर्न प्रयोग गरिन्छ कि मूल आधुनिक सुविधाहरु, को एक लोशन छ। पहिले आफ्नो अनुहार एक प्राकृतिक ड्राई रक्सी सफा गर्न प्रयोग प्राचीन समयमा, यो छाला को साँघुरो pores मद्दत गर्छ। कस्मेटिक्स प्रविधिको तयारीको परिवर्तन र सुधार भएकोले। त्यसपछि पानी वा रक्सी मा तयार छन् लोशन आए। सबै भन्दा साधारण तुरुन्तै ककडी लोशन भयो।
लोशन व्यञ्जनहरु एकदम सरल र घरमा तिनीहरूलाई खाना पकाउन गर्न अनुमति दिन्छ। यो भनेर थाह मात्र आवश्यक छ सुक्खा छाला तयार लोशन, पानी, र रक्सी लोशन (रक्सी वा वोदका मा) तेल छाला लागि तयार छन् छ। अनुहार लोशन disinfecting र छाला, साथै एक मेकअप रिमुभर मइस्चराइजिंग लागि प्रयोग गरिन्छ। यो माटो हटाउने मा मद्दत गर्छ र अतिरिक्त बोसो allergen संरचना छ। आफ्नो किनभने घर-पकाएको योगों, फ्रिज मा राखिएको हुनुपर्छ आफ्नो जीवन सामान्यतया दुई दिन, सानो छ।
पकाएको घरमा ककडी लोशन लामो कस्मेटिक्स को श्रेणी मा सबै भन्दा लोकप्रिय भएको छ। pantothenic, tartronic, म्याग्नेसियम, सोडियम, फलाम क्याल्सियम र सिलिकन - यो खीरे ठूलो संख्या भिटामिन बी, सी, एक एसिड, मा उपस्थित छन्। तिनीहरूले पनि फाइबर, फस्फोरस, सल्फर र आयोडिन समावेश गर्दछ। तपाईं छाला अझै पनि ककडी को एक टुकडा हटाउन सक्नुहुन्छ, र यो नरम र उज्ज्वल हुन्छ। त्यसैले लोशन, जो ककडी समावेश, beauticians सबैभन्दा प्रभावकारी मानिन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं अनुहार र Zener Setafil लोशन मा मुखासे लड्न प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा घरमा तयार ककडी लोशन बनाउन सक्छ। साथै शुद्ध र छाला ककडी एक विरंजन प्रभाव छ पोषण, यो freckles र छुटकारा गर्न मद्दत गर्छ गर्न उमेर धब्बे।
यो धेरै सरल माध्यम को नुस्खा। सम्म आफ्नो नम्बर आधा ग्लास पुग्छ, त्यसपछि रक्सी वा वोदका को नै रकम थप्न, एक भद्दा grater मा ककडी अंगीठी। दुई हप्ता (जमाई गर्न सकिन्छ) एक सुन्दर कोठा मा जिद्दी गर्न आवश्यक छ। को जलसेक पछि हटाउन र प्रयोगको लागि अर्को कन्टेनर मा खन्याउन तयार हुनुपर्छ। परिणामस्वरूप जलसेक तेल छाला को प्रयोग र हेरविचार लागि राम्रो अनुकूल छ।
सुक्खा छाला हेरचाह गर्न, ककडी लोशन अर्को नुस्खा लागि तयार छ। ककडी को नै रकम मा grated पानी उसिनेर बराबर भागहरु मा पतला हुनुपर्छ। परिणामस्वरूप संरचना हरेक 100 milliliters लागि ग्लिसेरिन को एक चम्मच थपियो गर्नुपर्छ। परिणामस्वरूप उपकरण तपाईं सुख्खा छाला को हेरचाह गर्न मद्दत गर्नेछ।
त्यहाँ खीरे प्रयोग छाला हेरविचार लागि व्यञ्जनहरु बढी परिष्कृत हालतमा छन्। हामी, grated ककडी चार चमचा सूक्ष्मता कटा कागति बोक्रा एक चमचा लिनुपर्छ थप्न र यसलाई ताजा निचोडा कागति को रस दुई चमचा थप्नुहोस्। वोदका एक गिलास भर्न सबै परिणामस्वरूप ठूलो। भाँडा कस बन्द र दुई वा तीन हप्तासम्म Infuse गर्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईं को जलसेक फिल्टर गर्न एक सानो उसिनेर पानी पतला र मह र एउटा अन्डा सेतो एक spoonful थप्न आवश्यक छ। त्यसैले ककडी लोशन तेल छाला प्रकारको दैनिक प्रयोग गर्न सकिन्छ।
सुक्खा छाला को मामला मा एक राम्रो रोचक नुस्खा छ। पहिलो, साना diced ककडी, यो उम्लिरहेको दूध एक कप संग, भर्न बारेमा पाँच मिनेट जोश। ठंडा पछि वजन फाटो। यो पनि सुक्खा छाला लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ककडी रस। यो बरफ लागि सामूहिक मात्रा मा खन्याउन र यी घन हरेक बिहान अनुहार हटाउन स्थिर हुनुपर्छ।
उहाँले सम्झना छ भनेर एक जन्मदिन कसरी मनाउन।
सुन्दर ओठ, वा Etalon कामुकता
अन्तरवार्ता स्थानहरू कसरी गर्ने?
"Cheshire बिरालो" - आशावादी मान्छे को लागि एक सकारात्मक मूल्य एक टाटु
Thoracic Elixir: प्रयोगको लागि निर्देशन
रूस को इतिहास: 19 औं सताब्दी
सर्वोत्कृष्ट डिजाइन बेडरूम संग फोटो वालपेपर
Receptions र banquets लागि माछा संग उत्सव canapés
Osmotic diuretic - यो के हो? लागूऔषधको सूची, कार्य को संयन्त्र
को जाडो लागि रातो टमाटर को सलाद: व्यञ्जनहरु
रचनात्मकता र Veronica Tushnova को जीवनी
McGurk को प्रभाव: तपाईं किन सुन्नुहुन्छ तपाईंको आँखाले किन असर गर्न सक्छ?
कसरी इच्छा पूरा गर्न
फेडोरोवस्की मस्जिद, पेरेसव्लाल-जेलिस्की: भ्रमण र समीक्षा